Sangano Re Medecins Sans Frontières Mu Zimbabwe Roshushikana Nekushaikwa Kwemari Yakakwana Yekutenga Ma ARVs
Chikumi 06, 2012
Sangano re Medecins Sans Frontières mu Zimbabwe rinoti vanhu vari kurarama nehutachiona hwe HIV-AIDS vanodarika zviuru makumi matanhatu nezvitanhatu, 66 thousand vakatarisana nedambudziko rwekushaya mishonga kana rubatsiro rwunobva kunze kwenyika rwukaramba rwuchishomeka.
Zimbabwe yange ichiwana mari yekubatsira zvirongwa zvema anti retroviral drugs, arvs pasi pehomwe ye Health Transition Fund.
Nyika dzinoti United Kingdom, Sweden, Norway, Ireland ne Canada ndidzo dzanga dzichitsigira chirongwa ichi. Asi gore rino homwe iyi haina mari yekushandisa mukutenga mishonga.
Vanowona nezvekufambiswa kwemashoko musangano re Medecins Sans Frontières mu Zimbabwe, va Stambuli Kim, vanoti sangano ravo riri kushushikana nehurongwa hwekuti vanoshandisa mishonga yema ARVs, vabhadhariswe mari kana nyika ikashaya rwutsigiro kubva kunyika dziri kunze kwenyika.
VaKim vanoti hurumende inofanirwa kushanda nemamwe masangano ari munyika mukutsvaga mari yekutenga mishonga uye inofanirwa kubvisa mari dzinobhadhariswa pama border ye duty kuitira kuti makambani anounza mishonga munyika asa dhurise mishonga iyi.
Hurukuro NaVa Stambuli Kim